Scroll Onye edemede Ozi Bar maka WordPress
Tuesday, January 18, 2011 Sunday, Jenụwarị 19, 2014 Douglas Karr
Akụkụ nke nchịkọta aha anyị na-abịa na ihe pụrụ iche pụrụ iche maka Martech Zone. Ọ bụ ezie na m na-akpọ saịtị a m blog, Achọrọ m ka blọọgụ bụrụ nchịkọta echiche site na ndị ọkachamara ndị ọzọ na ụlọ ọrụ ahụ. N'oge ụfọdụ, ekwetaghị m na ihe edere ebe a… mana m na-akwado eziokwu ahụ bụ na anyị niile nwere echiche dị iche na ụlọ ọrụ ahụ. Echere m na ọ dị mkpa ka ndị na-agụ ya nwee echiche dịgasị iche. Na n'ezie m na-agba onye ọ bụla ume nweta ya na ihe!
Ka o sina dị, ana m achọkwa ụzọ m ga-esi gbaa ndị ọzọ na-ede blọgụ ume ka ha nye aka. Otu n’ime echiche ndị ahụ amịwo mkpụrụ taa. Stephen Coley, nke DK New Media (ụlọ ọrụ anyị), ebipụtala beta mbụ nke ngwa mgbakwunye Ndị Egwu!
Ọ bụrụ na ị pịgharịa gaa na ala nke ibe anyị, ị nwere ike ịpịgharị ndị edemede ọ bụla iji hụ bios ha, njikọ ha na ntanetị ọhụrụ ha, yana njikọta na ibe obibi ha. Nwere ike ibugharị na ndị edemede niile site na iji akụ aka ekpe na aka nri. Ejiri jQuery na Ajax wụnye ngwa mgbakwunye ahụ (WordPress dakọtara), yabụ na ọ naghị ebuba data onye edemede niile ma belata ibe peeji ahụ.
Anyị na-achọ imeziwanye ngwa mgbakwunye ma gbakwunye ụfọdụ atụmatụ ndị ọzọ yana peeji nlekọta nchịkwa siri ike. N'ezie, Stivin na-arụ ọrụ na nke a n'etiti nkwa ndị ahịa ya oge ụfọdụ ọ na-ewe ogologo oge karịa ka anyị chọrọ! Ma ọ na-eme a heck nke ọrụ na ngwa mgbakwunye na-adị oke!
Jenụwarị 23, 2011 na 10:45 PM
Ahụrụ m ya n'anya! Na n'ezie m hụrụ preview image ị họọrọ. 🙂
Ugbu a ị meela ka m nwee ike itinyekwu posts na Marketing Tech Blog!